Siilaanyo: Dhiig ayaan u daadineynaa midnimo naceybka nagu jira – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Siilaanyo: Dhiig ayaan u daadineynaa midnimo naceybka nagu jira
30th September 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Madaxweynaha maamulka isku magacaabay Somaliland, Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa sheegay in reer Somaliland ay dhiigooda ku difaaci doonaan kala dhantaalidda midnimada Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Siilaanyo ayaa hadalkaan ka jeediyey Hargeysa, isagoo ka jawaabayey uu khudbad dhawaan madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Shekh Maxamuud ka jeediyey shirka golaha guud ee Qaramada Midoobay, uuna ku sheegay in midnimada Soomaaliya tahay lama taabtaan, maalina ay soo laaban doonto.
Axmed Siilaanyo ayaa ku dooday in midnimada Soomaaliya ay horay u faslintay, wixii hadda ka dambeeyana aysan diyaar u aheyn isu soo laabasho cusub.
“Waxaan leeyahay Somaliland waa qaran madaxbanaan, dadkiisuna tashaday, waxay rabitaankooda ku dhisteen oo ay ku meel marsadeen boqolkiiba todoba iyo sagaashan (97%). Midnimada Somalia waa tii fashilantay, diyaarna u ma nihin” ayuu yiri Siilaanyo.
“Dadkayagu waxay diyaar u yihiin inay dhiigooda ku difaacaan cid kasta oo ku soo xad gudubta Xuudka Somaliland” ayuu yiri madaxweyne Siilaanyo oo xadgudubka ula jeeda in Somaliland kasii mid ahaato Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Wuxuu Axmed Siilaanyo ku eedeeyey dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iney ka war-wareegeyso sii socoshada wada hadalkii kalohore uga furmay dalka Turkiga, wuxuuna dowladda Soomaaliya ugu baaqay iney soo fariisato miis lagu kala baxayo.
“Waxay dawladda Soomaaliya u muuqataa inaanay ixtiraamayn wixii aynu ku heshiinay, kana warwareegayso miiska wada hadalada, waxaanu ugu baaqaynaa miiska wada hadalada, si aynu u kala baxno” ayuu yiri Siilaanyo oo hadal u jeedinaye arday ah dufcaddii 11-aad ee ka qalinjabisay jaamacadda Hargeysa.
“Beesha caalamka waxaanu uga baahanahay inay garowsadaan xaqiiqada Somaliland ka jirta oo ay caawiyaan dimiquraadiyadda iyo horumarka ka hanaqaaday dalkan, dadka Somaliland waxaan ugu baaqayaa inay dalkooda ilaashadaan oo meel uga soo wada jeestaan” ayuu sidoo kale yiri Axmed Siilaanyo.
Somaliland ayaa ku dhawaaqday iney ka go’day Soomaaliya inteeda kale sanadkii 1991-kii kadib markii jabhaddii USC dagaal ku riday dowladdii dhexe ee Soomaaliya ee uu hogaaminayey Jen. Maxamed Siyaad Barre.
Madaxweyne Xasan oo ka qeybgalay kulan weyne xalay ka dhacay Hiliwaa
Sawirro: Ciyaarta ugu khatarta badan caalamka